प्रकाशको पहिलो स्मृति सभामा मन्त्री बिना मगरले यसरी गरिन् सिर्जनाको अपमान !
मङि्सर ०४, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ – नेपालको पुर्व-प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाश दाहाल गत वर्ष मङ्सिर ३ गते यस संसारबाट बिदा भएका थिए ।
ललितपुरको खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा सोमबार बिहान प्रकाश दाहालको पहिलो स्मृति सभा आयोजना गरिएको थियो । प्रचण्डले दिवंगत छोरा प्रकाश र छोरी ज्ञानुको नामबाट खोलिएको ‘प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान’ घोषणा पनि गरेका छन्। यस्तै कार्यक्रममै प्रकाश दाहालको स्मृतिमा निर्माण गरिएको स्मृति ग्रन्थ पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।
प्रकाश दाहालको स्मृति कार्यक्रममा बुहारी सिर्जनामाथि अपमानजनक व्यवहार भएको खुलासा भएको छ। कार्यक्रममा सिर्जनाको अपमान गरेको खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेकी प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर माथि आरोप लागेको छ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रकाश दाहालको स्मृतिमा निर्माण गरिएको स्मृति ग्रन्थमा प्रकाश दाहालकी पत्नी भनेर बिना मगरको मात्र नाम राखिएको छ ।
यस्तै स्मृति कार्यक्रममा पुगेकी सिर्जनामाथि मञ्चमै अपमान भएको बुझिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि पुगेकी सिर्जना कार्यक्रमस्थलको कुनामा बसेर हेरिरहेकी थिइन्।
नेकपाका केही नेताहरुले सिर्जनालाई पनि मञ्चको तेस्रो लहरमा लगेर राखेका थिए। उनी त्यहाँ बस्ने बितिकै बिना मगर पछाडी फर्किएर सिर्जनालाई केहि भनेकी थिइन्। त्यस लगतै रेणु गंगा र बिना मञ्चबाट केहि समयको लागि बाहिरिएका थिए।
रेणु, गंगा र बिना मञ्चबाट बाहिरिने बितिकै सिर्जना पनि मञ्चबाट उठेर पत्रकार दीर्घाको कुर्सीमा गएर बसेकी थिइन् । यी सम्पूर्ण दृश्य भिडियोमा पनि कैद भएको छ।
एक श्रोतमा अनुसार सिर्जनालाई सोमबारको कार्यक्रममा निमन्त्रणानै थिएन। त्यसै कारण मञ्चमा गएर बसेकी सिर्जनालाई बिनाले ‘तपाई किन आउनु भएको यहाँ ?’ भन्दै अपमानजनक व्यवहार गरेको प्रत्यक्षदर्शी एक सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, मङि्सर ०४, २०७५१७:०२
नागढुंगा चेकपोष्टबाट लागूऔषधसहित २ जना पक्राउ !
रानीपोखरी पुनः निर्माणबारे तपाईको राय के छ? सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेर रानीपोखरी उत्खनन गरिने
भारतीय सीमाक्षेत्रमा विप्लव माओबादीले लगाएको तारबर माथिको आदेश भन्दै हटाइएपछि…
निर्मला हत्या प्रकरण : सयभन्दा बढी व्यक्तिको डीएनए परिक्षण गर्ने तयारी !
राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश !
आज बिहानै प्रहरी इन्काउन्टरमा एक जनाको मृत्यु ! प्रहरीको गोलि टाउकोमै लागेको खुल्यो !